Trano ho an'ny daholobe - China Zhenyuan Steel Structure Engineering Co., Ltd.
Ny firafitry ny habakabaka, ny fizarana toerana, ny fandaminana vahoaka ary ny famindran-toerana ny tranom-panjakana, ary koa ny refy, ny endrika ary ny tontolo iainana (habetsahana, endrika ary kalitao) ny habaka. Anisan'ireny, ny fifantohana miavaka dia ny fampiasana ny habaka maritrano sy ny hetsika streamline.
Na dia tsy mitovy aza ny natiora sy ny fampiasa ny tranom-panjakana isan-karazany, dia azo zaraina telo izy ireo: ny ampahany ampiasaina lehibe, ny ampahany ampiasana faharoa (na ny ampahany fanampiana) ary ny ampifandraisan'ny fifamoivoizana. Amin'ny famolavolana dia tokony ho takatsika aloha ny fifandraisan'ireto faritra telo ireto amin'ny fandaminana sy ny fitambarana, ary hamaha tsirairay ny fifanoherana isan-karazany mba hahazoana ny fahaiza-mandanjalanja sy ny fahalavorariana ny fifandraisana miasa. Ao amin'ny fifandraisan'ny mpiorina amin'ireto fizarana telo ireto, ny fizarana habaka fampifandraisana ny fifamoivoizana dia matetika mitana andraikitra lehibe.
Ny ampahany amin'ny fifamoivoizana dia azo zaraina amin'ny endrika telo mahazatra: ny fifamoivoizana, ny fifamoivoizana ary ny fifamoivoizana.
Hevi-dehibe momba ny fizotran'ny fifamoivoizana:
Tokony ho mahitsy izy io, hisorohana ny fihodinana, hifandray akaiky amin'ny faritra tsirairay amin'ny habaka, ary hanana tsara kokoa daylighting sy jiro. Ohatra, lalan-tongotra.
Hevi-dehibe momba ny fizotry ny fifamoivoizana mitsangana:
Ny toerana sy ny habetsahana dia miankina amin'ny filan'ny asa sy ny fepetra takiana amin'ny afo. Izy io dia hanakaiky ny tobin'ny fitaterana, nalahatra mitovy amin'ny teboka voalohany sy faharoa, ary mety amin'ny isan'ny mpampiasa.
Hevi-dehibe amin'ny layout Hub fitaterana:
Mety ho azo ampiasaina, mety amin'ny habakabaka, mirindra amin'ny firafiny, mety amin'ny haingon-trano, ara-toekarena ary mahomby. Ny fiasa fampiasana sy ny famoronana fananahana zavakanto ara-nofo dia tokony ho raisina.
Amin'ny famolavolana tranom-panjakana, raha jerena ny fizarana olona, ​​ny fanovana ny làlana, ny fifindran'ny toerana ary ny fifandraisana amin'ny lalantsara, tohatra ary toerana hafa, ilaina ny mandamina efitrano sy endrika habaka hafa mba hitana ny andraikitry ny foibe fitaterana sy ny tetezamita.
Ny famolavolana ny fidirana sy ny fivoahan'ny efitrano fidirana dia miankina indrindra amin'ny fepetra roa: ny iray dia ny takiana amin'ny fampiasana, ary ny iray hafa dia ny fepetra takiana amin'ny fikarakarana ny habakabaka.
Fizaram-pahefana arovana amin'ny tranobe ho an'ny daholobe:
Ny foto-kevitra momba ny fizarana zoning dia ny fanasokajiana ny habaka arakaraka ny fepetra takiana amin'ny asa samihafa, ary ny fampifangaroana sy ny fizarana azy ireo arakaraky ny maha akaiky ny fifandraisan'izy ireo;
Ny fitsipiky ny fizarana zona dia: zoning mazava, fifandraisana mety, ary fandaminana mirindra mifanaraka amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny lehibe, faharoa, anatiny, ivelany, tabataba sy mangina, ka samy manana ny toerany avy; Mandritra izany fotoana izany, arakaraka ny tena ilaina amin'ny fampiasana, ny toerana dia halamina arakaraka ny filaharan'ny hetsika fivezivezen'ny olona. Ny fitambarana sy ny fizarana ny habaka dia handray ny toerana lehibe indrindra ho fotony, ary ny fandaminana ny habaka faharoa dia hahatonga ny fikajiana ny asan'ny habakabaka lehibe. Ny habaka hifandraisana ivelany dia hanakaiky ny tobin'ny fitaterana, ary ny toerana hampiasana anatiny dia hafenina. Ny fifandraisana sy ny fitokanana ny habaka dia horaisina tsara amin'ny alàlan'ny famakafakana lalina.
Fandroahana olona any amin'ny tranom-panjakana:
Ny fandroahana olona dia azo zaraina amin'ny toe-javatra mahazatra sy maika. Ny famindra toerana ara-dalàna dia azo zaraina ho mitohy (oh: fivarotana), afovoany (ohatra ny trano fampisehoana teatra) ary atambatra (ohatra ny efitrano fampirantiana). Afindra toerana ny famindran-toerana vonjy maika.
Malalaka ny famindrana olona amin'ny tranom-panjakana. Ny fametrahana ny faritra buffer amin'ny foibe dia hodinihina, ary azo hiparitaka tsara izy io rehefa ilaina mba hisorohana ny fitohanana be loatra. Ho an'ny hetsika mitohy dia mety ny manangana fivoahana sy isam-batan'olona misaraka. Raha jerena ny kaody fisorohana ny afo dia hodinihina feno ny fotoana famindrana toerana ary hikajiana ny fahaizan'ny fifamoivoizana.
Famaritana ny habetsahana, endrika ary kalitaon'ny habaka tokana:
Ny habeny, ny fahaizany, ny endriny, ny jiro, ny rivotra, ny tara-masoandro, ny mari-pana, ny hamandoana ary ny toetoetra hafa amin'ny habaka tokana no anton-javatra fototry ny fahamendrehana ary koa lafiny lehibe amin'ny olana amin'ny fananganana trano, izay hodinihina manontolo amin'ny famolavolana.
Ahitana tranobe birao, biraom-panjakana, sns. Trano fivarotana (toy ny toeram-pivarotana sy tranom-bola), tranom-pizahan-tany (toy ny hotely sy toeram-pialamboly), siansa, fanabeazana, kolontsaina sy tranobe ara-pahasalamana (ao anatin'izany ny kolontsaina, fanabeazana, fikarohana siantifika, fitsaboana, fahasalamana, tranobe fanatanjahan-tena, sns.), tranom-pifandraisana (toy ny paositra sy ny fifandraisan-davitra, ny fifandraisana, ny foibe angona angovo sy ny efitrano fampielezam-peo), ny tranobe fitaterana (toy ny seranam-piaramanidina, ny gara misy haingam-pandeha haingam-pandeha, ny gara, ny metro sy ny bus)
Mijanona ny toerana